Ukufudusa iqonga leGeospatial kwiminyaka eli-10 kamva-Microstation Geographics-Oracle Spatial-Geofumadas
NgoFebruwari, 2016 cadastre, Okufumaneka, Geospatial - GIS, Microstation-Bentley, qgis
Lo ngumngeni oqhelekileyo kwiiprojekthi ezininzi zeCadastral okanye zeCartography, ngelo xesha i-2000-2010 edibeneyo ne-Microstation Geographics njengenjini yedatha yendawo, ngokuqwalasela izizathu ezifana nalezi zilandelayo:
Ulawulo lwe-arch-node lwaluye kwaye luqhubeka lusebenza kakhulu, kwiiprojekthi ze-cadastral.
I-DGN yindlela ekhangayo, iqwalasela inguqulo yayo kwifayile efanayo, engatshintshi kwiminyaka ye-15, ngokuchasene nezinye iifom apho siye sabona ezininzi iinguqulelo ezingahambisani nayo yonke iminyaka emithathu.
Kwi-2002, isofthiwe ekhululekile yayiyiphupha elide kulokho esinakho namhlanje.
Imilinganiselo ye-OGC yayingabalulekanga nakwi-software yangasese.
Iifayile ze-shp zazingaphelelwanga kwiiprojekti eziphezulu kunye neendawo ziseko zendawo zazingavaliwe kwizicwangciso ezingezizo eziye zonakalisa ukusebenza kweevava ... kunye nesiliva.
Ukuxhumeka kude kwakukho umxhasi xa kuthelekiswa nento esinazo ngoku.
Ke, ukumiliselwa kwe-GIS esekwe kwiskim "esidityanisiweyo se-CAD" sisisombululo esisebenzayo, ngaphandle kokuncama ukusebenziseka kweenjongo zokubonisa. I-VBA API yayininzi kwinkqubo yolawulo lwentengiselwano yeendlela ezinxityelelaniswe neProjekthiWise kulawulo lweefayile ezibonakalayo kunye nokusetyenziswa kweGeoWeb Publisher kuhlalutyo lomhlaba olusuka kwiseva, nangona upapasho lwalunqunyelwe kwi-ActiveX kwi-Internet Explorer (ngaloo nyaka yayiyi isikhangeli esinye).
Ingxaki ayikokuvela ngokuthe ngcembe kwaye endaweni yokufudukela kwiServer yeGeospatial okanye iinguqulelo ezomeleleyo zeProjekthiWise, efuna ukwenza i-GIS iphile kwiifayile ezibonakalayo, inakho konke ukubanakho okuneelayisensi zeOracle Spatial kunye nokukwazi ukukhula. Yayingumceli mngeni wethu ke lowo.
1. Isiseko sedatha: Iipostgres, iSQL Server okanye iOracle?
Ngokukodwa, ndingathanda ukukhetha eyokuqala. Kodwa xa uphambi kwenkqubo yentengiselwano engakhange ijolise kwiinkonzo kodwa isebenze kakuhle, apho inxenye yelogic kunye nokuthembeka kufana ne-PL kwindawo yogcino lwedatha, utshintsho kwisiseko se-OpenSoure ayisiyongxamiseko. Hayi, ngaphandle kokuba injongo yakho kukuphuhlisa uhlobo olutsha lwenkqubo olungafumanekiyo okwangoku.
Kananjalo ayisiyonto yokwenza isenzo seTaliban ukuthoba yonke into enukayo ngasese. Ke ukuhlala no-Oracle sisigqibo sobulumko, ukuba sisebenza kakuhle, ukuba sikhulu kwaye siyanyanzelisa, ukuba siyilwe kakuhle, sikhuselwe kwaye ukuba inkxaso iyaxutyushwa. Umxholo wesinye isihlandlo.
Ngoko oko kwakushiywe kukuba kukuphuhlise ukusebenza kweedatha ekufudlulelweni kule siseko, iinkonzo zepapasho kunye nezixhobo zokulawula idatha yenkcazelo ye vector.
Ukulawula iimbopheleleko kunye nabasebenzisi, ababekade belawulwa ngaphambili kwiProjekthiWise, ithuluzi lokumodareyitha lenziwe livumelekile:
Lawula abasebenzisi kunye neendima ezivela kwi-VBA eBentleyMap.
Ukunikezela kumsebenzisi ngamalungelo okulawula, ngokufanelekileyo kumasebe nakomasipala.
Nika ilungelo kwifayile yeefadastral nganye ngeprojekthi.
Ilungelo kwizixhobo ezikhoyo kuLwakhiwo, ushicilelo, upapasho, uthethwano kunye neemodyuli zolawulo. Ngale ndlela, zizicelo ezitsha kuphela ezenziweyo kwaye ziyavela kubasebenzisi ngokwendima yabo okanye isabelo esithile.
Leli janeli lokungena ngemvume lenza lula ukuxakeka kwezinto eziqhelekileyo zeeprojekthi zeBentleyMap, okokuba ngokungena kwakho uza kubona umthi weentlobo kunye neempawu ezichazwe kwi-Geospatial Administrator.
Iphaneli yoku isombulula ukungaqondani kunye nomngcipheko kubasebenzisi abatsha kwiimpawu ezinje ngokuDibana kweDatha. Yeyiphi enye i-bummer, kuba i-Bentley ihlela ngokwendalo kwi-Oracle Spatial, entle leyo kodwa ikwayingozi xa ungenalo ulawulo lwentengiselwano.
Ngaloo ndlela, umzekelo, iModyuli yokwakha yayinezixhobo ezilandelayo:
Ukufuduka Kwemigudu Yendawo
Thumela i-Shp / CAD
Ngenisa i-Shp / CAD
Ikhonkco ye Geo-Line
Ikhonkco ye Geo-Point
Isixhumanisi se Geo-Region
Izixhobo ezongezelelweyo zongezwa ngokuthe ngcembe, kubandakanywa ezinye ukuhlela ngqo i-Geospatial Administrator.
Umlawuli ukujonga iimpawu
Shintsha i-Curve ukuya kwi-LineString
Yakha i impahla
Hlela uphawu lwe-Xfm
Hlela iprojekthi yeXfm
Susa ii Xfm
Bhala ngaphezulu iimpawu
Ukuxhatshazwa ngohlu lokuhlahla
2. Idatha: Ukufuduka ukusuka kwi-DGN ukuya kwi-Spatial Base: Oracle Buider okanye iBentley Imephu?
Umngeni onomdla kakhulu kule nto, ukuba ukufuduka okulawulwayo kwakufuneka kwaye, ngokuqwalasela ukuba iifayile zeDGN zihlaziywe iminyaka engaphezu kwe-10 zinokuba neengxaki ze-topology - ubuhlanya bokwenene -.
Ewe kunjalo. Ezona ngxaki ziphambili kwiimephu zilapha:
Ukuguqulwa kwesalathiso kumda wefayili (icandelo okanye ummandla) kubonisa ukuba kufuneka kuguqulwe kokubili, kubandakanywa ukungalingani kwamanani kwiimeko ezifana nelo candelo kwicala elinye kodwa kummelwane ukuba loo mgca unamacandelo.
Kukho iifayile emva kokuthengiswa kwe-300 ukugcinwa kwimbali ye-DGN kungonakaliswa.
Akukho iingxaki ezintsonkothileyo kwikhabhinethi alawulekayo, njengaxa indawo esilala phezu komnye ummelwane kwenye fayile, kuba imali ayikwazi ukusonjululwa kwi mephu kuba oko bekuya kuthetha ukuba sihlolwe entsimini ukunqanda echaphazela wesithathu.
Izenzo ezimbi, ezifana nokufakwa kweemephu kwimilinganiselo eyahlukileyo, kule meko kukho amacandelo kwi-NAD27, nangona umgangatho wawunguWGS84. Kwiimeko ezinzima, ulungiso olwenziwe phakathi kwedatha evela kumaphulo ahlukeneyo, kumbindi.
Isisombululo sixhobo sohlobo lwe-Wizzard yokufuduka kwamanzi, okungahanjiswa ngamnye kwimephu, emininzi okanye nangomasipala (iholo leedolophu) okanye isebe.
Ngokuyisisiseko eso sixhobo sithatha idatha yeprojekthi yeGeographics kwaye siyakhuthaza kwiimpawu zeBenltey Imephu, kwaye yenza ulandelelwano lwee-validation, njenge:
Ulwalamano olulodwa phakathi kwejometri kunye nedatha,
Ukuqinisekiswa kokungabikho kweziphindaphindiweyo,
Ukuqinisekiswa kwe-cent cent-centroid,
Ukuqinisekiswa kweemephu malunga nezinto ezingasebenziyo kwiziko ledatha,
Ukuqinisekiswa kwe-Topology ngokubhekiselele kwiibongozo ezikhoyo kwisiseko sendawo
Emva kokuqinisekisa, iphaneli ivumela ukongeza ulwazi ngeendlela ezinkulu, njengendlela yokulinganisa kunye nomgangatho wokulawula umgangatho wale datha.
Okokugqibela, thumela kwiziko ledatha, ekugqibeleni uvelise ingxelo. Ukusuka kwinto yokwenyani kukho ukolula okungathethekiyo, kodwa ekugqibeleni kwahlengahlengiswa iminqweno yeOracle Spatial esekude ngoku njengeeBentley kunye nendlela yazo yokubona iipropathi ezintsonkothileyo okanye uninzi lwee-vertic.
3. Upapasho: iGeoserver okanye iMapServer? I-OpenLayers okanye iLeaflet?
Umbukeli wakhiwe kusetyenziswa i-OpenLayers kunye nezinye iiplagi. Ngethuba lokuqala emva kweminyaka eli-10 yokungahoywa kophuhliso lwendawo, kwabonakala umbukeli omtsha othathe indawo ye-ActiveX yeGeoWeb Publisher. Ikhowudi ye-MapFish yayisetyenziselwa ukuprinta, i-geojson ukulawula umthi osecaleni, ukusuka eGeoserver izingqimba ezinikezelweyo zisuka kwi-OracleSpatial zanikezelwa.
Ekugqibeleni, ukutshintshwa kobuchwephesha kwenzelwa ngokwegrafu elandelayo. Njengoko uyakubona, inhlanganisela yekhowudi yamahhala, ukugcina i-database kunye nolawulo lomhlaba usebenzisa isofthiwe esetyenzisiweyo.
4. Yakha kwaye uhlele, ngqo kwi-Oracle Spatial. Imephu yeBentley okanye iQGIS?
Eli lelinye ibali. Imephu ye-Bentley ihlela ngokwendalo, ebangela ukungavisisani ukuba ayizukusebenza ngeNkonzo yokuNikezelwa kweWebhu yeWebhu (WFS). Impixano yile:
Indlela yokuyicombulula umgaqo wokungavumeli i-topology ifumaneka, ukuba ihleliwe kwaye xa ifuna ukuthumela ingxelo yokuba into iyazichaphazela?
Oku kusombululo ngokuguqulela kwangaphambili, ukulungiswa ngokuthe ngqo kunye nokuqinisekisa ukuba xa ukuthumela, ukuba kukho into ehlulekayo ukuguqulelwa ibuyiswe ngaphandle kokuba ukuthengiselana kuqedile kodwa kwimeko engaphumeleliyo.
Enye ingxaki efuneka ixazululwe yiyo yokungena kwedatha enkulu, kucinga ukuba abasebenzisi kufuneka bayeke ukusebenzisa i-Geographics kwaye babe neeprojekthi ezininzi eziphakamisa i-cadastre enkulu.
Oku kwakulula kuba kuphela isixhobo esifana nesasetyenziselwa ukudibanisa idatha kwi-Microstation Geographics eyenziwe, ukuququzelela ubunako beBentleyMap kunye nomncedisi olawulwa ngakumbi.
Umfanekiso ubonisa ukuba aphuhliswa njani esi sixhobo, ezinye izinto awohluke, ezifana indalo kunye nobhaliso eziphezulu kunye kubandakanywe Puntoparcela njengoko uluhlu usebenziso kwimeko indlela yokulinganisa ezinye eziphezulu ukuhlangabezana umgangatho othile umgangatho.
Ngokuqinisekileyo, oku kuhamba kulungile, kuba abasebenzisi bayazi ukuba zeziphi izixhobo abazisebenzisa rhoqo. Kwakudingeka ukubenza batshintshe isimo sabo sengqondo phakathi kokuhamba ukusuka kwizinto ezininzi ukuya kubaphathi ngamanqanaba, ukukhuthaza izibonelelo ezintsha ukuze balibale i-Microstation V8 2004, njengenkonzo ye-WMS, ukuhanjiswa kwezinto kunye nokwamkelwa kweefayile ze-DWG zeenguqulelo zamva nje; Ungasathethi ke ngokusebenzisana kunye ne-kml, shp kunye ne-gml yeyona astral.
Elinganayo, yenziwa izixhobo zokugcinwa kwe-cadastral, enokukhetha ukulungiswa ngokuthe ngqo kwiimo okanye ukunciphisa i-arc-node kwiimeko ezinzima.
5. Abathengi boomasipala ngeGML. QGIS okanye gvSIG?
QGIS. Kodwa lelo lelinye ibali onokulibalisa kamva.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Mapping Project Land Securities in Latin America kunye Caribbean
Post Next Indawo yeTwilightOkulandelayo »